လင်းစက်နွယ်: တောင်ပံကျိုးတဲ့ မိုးကောင်းကင်
“နင်တို့ နှစ်ယောက် အရမ်း တူတာပဲ..”
မြူခိုး ဝေနေသော မျက်ဝန်းများထဲ စိုးထိတ် အားငယ်မှုတွေ ပျော်ဝင် နေသော မမကို ကြည့်ရင်း အလိုလို ၀မ်းနည်းလာသည်။
ညာဘက်ပါးပြင်ပေါ် ကြည်လဲ့သော အရာတစ်ခု ရုတ်တရက် ဖြတ်ပြေး သွားသည်ကိုပင် ကျွန်မ လက်ဖမိုးက မတားဆီး လိုက်နိုင်ခဲ့။ စားပွဲပေါ်၌ အသင့်ရှိနေသော အငွေ့ တထောင်းထောင်းနှင့် အိုဗာတင်း ဖျော်ထားသည့် ခွက်ကလေး
“ငါ ဒါကို ငါ့အဖေနဲ့ အမေကိုတောင် မတိုက်ခဲ့ဘူး၊ သူ ပေးထားမှန်း သိလို့၊ ငါ အဲဒီ အခွံတွေတောင် သိမ်းထားခဲ့တာ၊ ငါ ဘယ်လောက် ရူးသလဲနော်”
မမ မျက်လုံးတွေ အနည်းငယ် နီကြင်နေပြီ။ မို့အစ်နေသော မျက်ခွံများကြောင့် ကျွန်မဆီ နာကျင်မှုတွေ ကူးခတ်သွားသည်။
“ရည်၊ Sky ဘယ်သူလဲ၊ သိလား ”
“မမ အိုတီမှာ ကေ့(စ်) အသင့်ဖြစ်ပြီ”
ရုတ်တရက် ဘလူးစတက်(ဖ်) လာ အကြောင်းကြားတော့ မမနှင့်ကျွန်မ သတိ အနေအထား ပြန်ကပ်လိုက်ရသည်။ မမကေ့(စ်) ၀င်လျှင် အကူ ဟောက်ဆာဂျင် အနေနှင့် ကျွန်မ ၀င်လေ့ရှိသည်။
“ရည်၊ ငါနင့်ကို အရမ်း ကျေးဇူးတင်တယ် သိလား၊ ဒါကြောင့် ငါတိုက်တာ တစ်ဝက်တော့ သောက်သင့်ပါတယ် ”
ငြင်းဆန်နေသည့် ကြားက သူမ အတင်း တိုက်တော့ ကျွန်မ သောက်ပစ် လိုက်ပါသည်။ ထို့နောက် မပြေးရုံတစ်မည် ခပ်သော့သော့ ခြေလှမ်းဖြင့် ခွဲစိတ်ခန်းဆီ ချီတက်တော့ မမ ခန္ဓာ ကိုယ်သေးသေးလေးက ပစ်လဲကျမတတ်။ သား ဖွားဆောင်မှ ခွဲစိတ်ခန်းသို့ အကူး ပြေးလွှားရင်း ကပင် ကျွန်မ မမအတွက် နာကျင်ရပါသည်။
စနစ်တကျ ပိုးသတ်ထားသော ၀တ်ရုံအား ခြုံလွှမ်းလျက် ခွဲစိတ်ရန် အသင့် အနေအထားဖြစ် နေသောမမ။ အခုတော့လည်း အစောက ဝေဒနာ တွေ တံစက်မြိတ် အပြင်ဘက်ကို လွင့်စဉ် သွားသလို။ မမမျက်လုံးတွေ ပြန်လည် ကြည်လင်လာ ပြီး အော်ပရေးရှင်း နယ်ပယ် ထဲမှာသာ ကျောက် ချထား နိုင်ခဲ့ပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဒါသည် တကယ့်ကို တဒင်္ဂဆိုတာ ကျွန်မ သိပါသည်။
ကေ့(စ်)က တီအေအိတ်(ခ်ျ)၊ ဘီအက်(စ်) အိုဟု ကျွန်မတို့ အတိုကောက် သုံးနှုန်းသော သား အိမ်၊ သားဥအိမ်နှင့်ပြွန် ဖယ်ရှားပစ်ရမည့် ကေ့(စ်) ဖြစ်သည်။ မမဘေး၌ အကူ ၀င်နေရင်းက ကျွန်မ ထမင်း မစားရသေးတာ သတိရသွားသည်။ အနည်းငယ် ရီဝေေ၀ ဖြစ်နေရင်းက ရိထရက်တာ ကိရိယာ သုံးချောင်းကို အားတင်း၍ ဆွဲထားရ သည်။ ဟောက်ဆာဂျင် ဘ၀၌ ရိထရက်တာ ဆွဲရခြင်းသည် တာဝန် တစ်ခုပဲဖြစ်သည်။ လက်အံ သေပြီး လွှတ်ချ လိုက်လျှင်ဖြင့် မမ အကြီးအကျယ် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်သွားမှာပဲ။အနည်း ငယ်အားနာစွာပင် ကြွက်သားတွေအား ပင်ပန်းစွာ ဆိုင်းထားရသည်။
“အဲ- ရည်၊ ထမင်းမစား ရသေးဘူးပဲ၊ လူလဲလိုက်ပါလား၊ ရိထရတ်တာ ဆွဲရတာ ပင် ပန်းတယ်၊ ဗိုက်မပိတ်သေးဘူး၊ ကြာဦးမှာ ”
တခုတ်တရ သတိရ ဖြစ်ပေးတော့ မမကို ကျွန်မ ကျေးဇူး တင်ရသည်။ သေသပ်သော ခွဲစိတ်မှု အောက်၌ ချောမွေ့ ညီညာနေသော သားအိမ်လေး ပါလာသည်။ မမထက် ခန္ဓာကိုယ် ကြံ့ခိုင် သန်စွမ်းသော ကျွန်မမှာမူ ရီထရက်တာ ဆွဲနေ ရတာဖြင့် အတော် ပင်ပန်းနေခဲ့ပြီ။ မမကတော့ နူးညံ့ သေသပ်သော လက်ချောင်းများဖြင့် ခမ်းနားသော ခွဲစိတ်မှုကို လုပ်ဆောင် ပြီးစီးသွားသည်။
ခွဲခန်းမှ အထွက် နာရီကို လှမ်းကြည့်တော့ အတော် ညစ်ညူးသွားသည်။ ညနေငါးနာရီထိုး တော့မည်။ အင်္ဂါနှင့် ကြာသာပတေးက သားဖွား မီးယပ်ဆောင်၏ ခွဲခန်းနေ့ဖြစ်လေတော့ ခွဲမည့် သူများသည့်အခါ ရုံးချိန် ကျော်လွန်သွားတတ်ပါ သည်။
“ဟဲ့ ရည်မွန်၊ နင်ဘယ်သွား မလို့လဲ၊ ဟို ဘက်ယောင်လို့ မသွားနဲ့၊ ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း ၀င်နေတယ်”
မိုးသန့် သတိပေးတော့ ကျေးဇူးတင်ရ သည်။ ဟောက်(စ်)ဆင်းတာ အရှိန် ရလာသည်နှင့် အမျှ ဆိုင်ကလုန်းဆိုလျှင် ရှောင်တတ်လာခဲ့ပြီ။
“ရည်၊ Sky ဘယ်သူလဲ၊ နင်သိလား”
“မမတော့ ရှစ်(ထ်) တွေ လုပ်နေပြီကွာ”
ကျွန်မနှင့် မမက စိတ်မကြည်လျှင် အင်္ဂလိပ်လို အသံထွက် ဆဲပစ်တတ်ကြသည်။ ရှစ်(ထ်) ဟုဆဲရတာ အားရပါးရရှိသတဲ့။ မမ၏ ကောင်းကင်က ထိုသို့ သုံးနှုန်းတော့လည်း ကျွန်မပါ အကျင့်စွဲကာ သုံးနှုန်းမိသွားပြီ။
“အေးဟာ၊ ရှစ်(ထ်) တွေ လုပ်နေမိပြီ”
ရယ်မလိုလိုနှင့် မချိုပြုံးဖြင့် တန့်သွားသော မမမျက်နှာကို မြင်တော့ ပြုံးရင်းစွဲ ကျွန်မ နှုတ် ခမ်းသားတွေ တွန့်ကြေကုန်သည်။
အိုဂျီဝါ့(ဒ်) ရောက်ခါစကပင် အားငယ်သော မမ၏အသွင်အား သတိပြုမိခဲ့သည်။ နောက် ဆုံးနှစ်၌ မမက ကျွန်မတို့အား စာသင်ဖူးမည် ဖြစ်သော်လည်း ရေရာစွာ သတိမထားမိ။ အလုပ်ထဲမှာ အစ်မတွေ အများကြီး ရှိလျက်နှင့် မမ ကိုသာ ကျွန်မ နှောင်တွယ်မိသည်။ အနည်းငယ် စိတ်မရှည်စွာ အော်တတ်မြဲဖြစ်ပေမယ့် မမအော်လျှင် ခဏလေးနှင့် ပြီးဆုံးသွားတတ်တာ၊ ဟောက်(စ်)တွေနှင့် ချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာ ညီအစ်မတွေ ပမာ တရင်းတနှီး နေပေးတာ တွေကြောင့် မမကို အားလုံးက ၀ိုင်းပြီး ချစ်ကြတာ မဆန်းပါ။
အချိန်ခဏလေး အတွင်းမှာ မမနှင့် ကျွန်မ အလွန် ရင်းနှီးသွားသည်။ မာနကြီး မလိုနှင့် ပျော့ ပျောင်းအားငယ် တတ်သော မမ၏ စရိုက်ကြောင့် မမအား သနားမိခဲ့သည်။
“မြတ်နိုးချစ် ဆိုတဲ့ ကလေးလေး၊ ကိုယ် အဲဒီ ကလေးကို အရမ်း ချစ်မိသွားပြီ ဆိုမှ၊ ကိုယ့်ရဲ့ သူရဲ ဘောကြောင်မှုတွေကြောင့် သူ့ကို သူများလက်ထဲ ထည့်လိုက်ရတာ ၊ အမှန်က ကိုယ် သူ့ကို မွေးစား လို့ရတယ်”
မမ ကျွန်မအား ၀မ်းနည်းစွာ ဖွင့်ဟခဲ့ဖူးသည်။ ၀ါ့(ဒ်)ထဲ၌ မွေးပြီး ပစ်ထားခဲ့သော ကလေးအား မမ အရမ်း နှောင်တွယ် သွားခဲ့ ဖူးသတဲ့။ ထို့နောက်မှာ သူမ ဘ၀၏ အရေးကြီးသော နောက်ထပ် လူတစ်ယောက်။ တမင်တကာကြီး လှစ်ဟပြတာ မဟုတ်ပေမယ့် ကျွန်မ မြင်သာနိုင် ပါသည်။
ခင်မင်ရင်းစွဲ ရှိလာချိန်မှာတော့ ကျွန်မ ၀တ္ထု ရေးကြောင်း မမအား ဖွင့်ဟဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မ ၀တ္ထုတိုများအား အချိန်ပေး ဖတ်၍ ဝေဖန်ရင်းနှင့် ပင် မမ နှလုံးသား ဝေဒနာက ပိုပိုဆိုးလာကြောင်း ရိပ်မိခဲ့သည်။
“ငါ နင့်ဝတ္ထုတွေ ဖတ်ရမှာ ကြောက်တယ်ဟာ”
ကျွန်မ အသံထွက် ရယ်မောတော့ သူမ လိုက်မရယ်။
“နင့်ဝတ္ထုတွေက ငါ့ကို စောင်းရေးနေသ လိုပဲ”
“မမနဲ့ မတွေ့ခင်ကတည်းက ရေးထားတာ ပါ မမရဲ့”
“မဟုတ်သေးဘူး။ ငါ နင့်ကို အရမ်း ကြောက်တယ်၊ နင် သူနဲ့ အရမ်းတူတာပဲ”
ဘုရားရေ။ ကျွန်မ နောက်တစ်ခါ အသံ ထွက် ရယ်မောမိပြန်သည်။
“အပျိုစင်က နင့်ရဲ့ ပျက်သုဉ်းအိမ်ကို ဖတ် ပြီး ငါ မျက်ရည်ကျတယ်၊ နင် မကောင်းဘူး”
ကျွန်မ အမှန်တကယ် ရယ်မောတော့ သူမ မကျေနပ်ပါ။
“မရယ်နဲ့၊ ငါ တကယ်ငိုမိတာ၊ အဲဒီဝတ္ထုထဲ ကလိုပဲ၊ သူ့ဘ၀က”
မကြာခင်မှာ ကျွန်မ အတင်း ဖတ်ခိုင်း၍ နှောင်ငင်မိသော ကောင်းကင်အား မမ ဖတ်ပေးခဲ့ချိန်မှာတော့ အရှုံးတွေ သက်ဝင်နေသော မမ နှလုံးသား အား တစေ့တစောင်း အကဲခတ်ခွင့်ရခဲ့သည်။
“ဟုတ်တယ် ရည်၊ အဲဒီဝတ္ထုထဲကလို ချွတ်စွပ်ပဲ၊ မိုက်ရိုင်းတယ် သိလား၊ ဒါပေမဲ့ ငါသူ့ကို အရမ်းချစ်တယ်ဟာ”
“အာ- ဘယ်လိုလဲ မမရဲ့၊ သမီးဝတ္ထုတွေက အဲသလောက်တောင် တိုက်ဆိုင်နေရလား၊ ဘာလဲ အဲဒီ ၀တ္ထုထဲကလို မမတို့ နှစ်ယောက်က”
မမ ရယ်လိုက်တော့ ကျွန်မ ဆက်မေးရမှာ အားနာသွားသည်။
“ဟုတ်တယ်ရည်၊ သူက ငါ့ရဲ့ကောင်းကင်ပဲ၊ Sky ပဲ”
ဒါနှင့်ပင် သူမ နှလုံးသားထဲက ပုံရိပ်အား Sky ဟု အမည်တပ်ခဲ့ကြပြန် သည်။ ထို့နောက်တွင်တော့ သူမအား အငိုက်ဖမ်း၍ မေးခွန်းထုတ်လိုက် ရသည်။ မမက သူ့အသက်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးလျှင် ဘယ်တော့မှ မဖြေ တတ်သူဖြစ်သော်လည်း သည်တစ်ချိန်မှာတော့-
“မမ အဲဒီ ၀တ္ထုထဲကလို လေးဆယ်ကျော်လို့လား”
“ဒါဆို လေးဆယ်နဲ့ ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ”
“မမေးနဲ့ဟာ..၊ ရှစ်(ထ်) တွေ”
သူမ ခန္ဓာကိုယ် ဆတ်ခနဲ တင်းသွားတော့ ကျွန်မ ရယ်ချင်သွားသည်။ နောက်ထပ် သူက စကားတစ်ခွန်း မတိုင်မီ အထိပေါ့လေ။
“သူ ဘယ်နှနှစ်လဲ၊ မမေးတော့ဘူးလား”
ဟုတ်ပါရဲ့၊ မမပြောမှ ကျွန်မမေးဖို့ သတိရသွားသည်။
စကိုင်းဟု အမည်တွင် သူမှာ အညိုရောင် မျက်ဝန်းလေးတွေ ရှိကြောင်း မမ ပြောပြခဲ့တုန်းက ကျွန်မ အနည်းငယ် ရယ်ချင်သွားသည်။ မမ၏ မျက်လုံး များမှာလည်း ပီဘိ အညိုရောင်လေးတွေ မဟုတ်လား။
“သူ့မှာ အညိုရောင် မျက်ဝန်း လေးတွေရှိတယ်။ အဲဒီ မျက်ဝန်း တွေကြောင့် ငါသူ့ကို ချစ်မိသွားတာ”
စကိုင်းနှင့် မမ ဆယ့်ခုနစ်နှစ် ကွာကြောင်း သိရစဉ်က ကျွန်မ မအံ့သြမိ ပါ။ မမဘ၀၌ အသက်လေးဆယ် အရွယ်မှာမှ အချစ်နှင့် ရင်ခုန်မှုကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည့် အချိန် ကျွန်မ မမကို အလွန် အံ့သြမိရသည်။
“ဟုတ်တယ် ရည်၊ တစ်သက်လုံး ထိန်းချုပ် လာပြီးတော့မှ ငါဘယ်လို ကြောင်သွားမှန်း မသိတာ”
စကိုင်း ဟောက်ဆာဂျင်ဆင်းတော့ မမကို အရမ်းချစ်ခဲ့တာ...။
မမအတွက် သည်းသည်း လှုပ်ခဲ့ဖူးတာ....။
စကိုင်းက လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်သည့် နေရာမှာ အလွန်တော်တာ...။ စကိုင်းအကြောင်း ပြောလျှင်ဖြင့် မမ မျက်လုံးညိုလေးတွေ လက်သွား တတ်တာ ကျွန်မ မြင်ပါသည်။
“ငါ ၀ါ့(ဒ်) ထဲမှာဆို သူလိုက်လာတယ်။ ငါအိုပီဒီ ဆင်းလည်း အနားမှာ ရှိတယ်။ အိုတီဝင်လည်း သူလိုက်ပေးတယ်။ ငါ့ကို သူ့မျက်စိ အောက်ကကို လုံးဝ အပျောက် မခံခဲ့တာ ရည်”
ထို ဂရုစိုက်မှု တွေကြောင့်ပဲ မမ အနည်းငယ် ကြောင်သွားတာ ဖြစ်မည်ဟု ကျွန်မ ထင်မြင် ချက်ပေးတော့ မမ ရယ်ပါသည်။
“ပြီးတော့ နင်နဲ့စကိုင်း အရမ်းတူတယ်။ ဆိုးတာရော၊ တော်တဲ့နေရာရော၊ စကိုင်းက နင့်လိုတော့ ဟိုစပ်စပ် သည်စပ်စပ် မလုပ်ဘူး၊ သီချင်းဆိုလည်း မတော်ဘူး၊ စာလည်း မရေးတတ်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ သူက လူနာတွေကို ဂရုစိုက်တဲ့ နေရာမှာ အရမ်း စိတ်ရှည်တာ”
အဲ- ကျွန်မကတော့ စိတ်မရှည်ဘူးပေါ့လေ။ အလိုလို ခဏခဏ စကိုင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခံ လာရတော့လည်း အနည်းငယ် ချဉ်လာပြီ။
“မမက စကိုင်းကို ချစ်မိသွားတာ အညို ရောင်မျက်ဝန်းတွေရဲ့ ဖြားယောင်းမှုပေါ့လေ”
“ရှစ်(ထ်)တွေ၊ ၀တ္ထုထဲကလို လာမပြောနဲ့၊ လရောင်ရဲ့ဖမ်းစားမှုတွေ ဘာတွေ”
တဖြည်းဖြည်းနှင့် မအားလပ်သည့် ကြားက စကိုင်းအကြောင်း ကျွန်မကို ပြောပြလျှင်ဖြင့် သူ ပင်ပန်းမှုတွေ သက်သာ ပြေလျော့တတ်တာ သတိ ထားမိခဲ့သည်။ အိုတီထဲမှာ သူနှင့် မျက်နှာချင်း ဆိုင်လျက် အကူ ၀င်ရလျှင်တော့ အညိုရောင် မျက်ဝန်းများ ထဲက အားငယ်ရိပ်ကို ကျွန်မ ဖမ်းဆုပ်လို့ ရနိုင်ပြီ။ မမနှင့် ကျွန်မ၏ နာရီများ၌ အလုပ်ကိစ္စ ပြီးလျှင် စကိုင်းက နေရာယူတတ် လာခဲ့ပြီ။ စကိုင်းက မမကို သာမက ကျွန်မကိုပါ ဖမ်းစားလာနိုင်ခဲ့ပြီ။
“စကိုင်းကို သမီး ကြူပစ် လိုက်မယ်ကွာ၊ သည်လောက်ဆိုးတဲ့လူ”
“မရယ်နဲ့၊ သူ့မှာ အရမ်းချစ်ရမယ့် ကောင်မလေး ရှိနေပြီ”
ပြောရင်းနှင့် မမ ငိုပြန်သည်။ ကျွန်မနှင့် စကားပြောတိုင်း မမ ငိုတော့ ကျွန်မပါ ငရဲကြီး ရသည်။ ထိုသို့ပြောလျှင်တော့ မမ စိတ်ဆိုးတတ်သည်။
“ငါဟောက်စ်တွေနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး မနေတော့တာ နှစ်နှစ်ရှိပြီ၊ ငါ အရမ်းပြောင်းလဲသွားတာ၊ နင်ရောက်လာမှ ငါ နင်နဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး နေတာ၊ ဒါပေမဲ့ ငါ နင့်ကို ကြောက်တယ်ဟာ”
ထို့နောက်တွင်တော့ ပဟေဠိဆန်သော မမ၏ လျှို့ဝှက်ချက်များထဲ ကျွန်မပါ အနည်းငယ် ကြောင်သွားသည်။ မမတော့ ရူးနေပါပြီဟု မညှာမတာ ကောက်ချက်ချတော့ မမ ထောက်ခံပါသည်။
၅။ ၀ါ့ဒ်ထဲ၌ ပြဿနာ ဖြစ်ပြီဆိုလျှင်ဖြင့် ကျွန်မ၌ တိုင်တည်စရာ မမသာ ရှိသည်။ ပြဿနာ တော်တော်များများကို မမ ဖြေရှင်း ပေးနိုင်တာ များသည်။ ထိုနေ့ကတော့ ချစ်သူများ နေ့၌ ကျွန်မ နာမည်နှင့် ချောကလက် ရောက်လာခဲ့ကြောင်း မမကို ဖွင့်ဟခဲ့မိ ချိန်ထိ ထူးထူးခြားခြား မရှိသေး။ ချောကလက်နှင့် အတူပါလာသော သီချင်းလေးတွေကြောင့် သီချင်း ပိုင်ရှင်အား စိတ်ဝင်စား မိသွားသည်ဟု ဆိုလိုက်မိတော့ သူနှင့် ကျွန်မ အကြီးအကျယ် စကားများသည်။
“ဒါ တကယ့် ရှစ်ထ် အလုပ်တွေ၊ ဒါဟာ လုံးဝ အရေးမကြီးဘူး ရည်၊ လူ့ဘ၀မှာ အရေး ကြီးဆုံးက စားဝတ်နေရေးပဲ၊ နင့်မှာ စားဖို့မပူရ ဘူး၊ နေဖို့ မပူရဘူး၊ ဒါကြောင့် နင် အရည်မရ၊ အဖတ်မရတွေအတွက် အချိန် ကုန်ခံနိုင်တာ”
မမ စကားက မှန်နေသလို ထိပါး လွန်းနေ ခဲ့သည်။ မမ ကျွန်မကို ဘာတွေပြောင်းလဲပေး ခဲ့သလဲ။ တစ်လောကလုံးကို အရွဲ့တိုက် ချင်သည့် ညစ်စုတ်စုတ် စိတ်ဓာတ်ကို အစွယ် ကျိုးစေခဲ့တာ၊ ပြဿနာနှင့် ရင်ဆိုင်ရတိုင်း အရင်ကဆို ကျွန်မ ကိုယ်တိုင် ဖြေရှင်းပြီး ဘာမှမဖြစ်သလို နေနိုင်ခဲ့ သောဘ၀ကနေ နေ့ချင်းညချင်း ပြဿနာဆိုတာ ကို နောက်ဖေးပေါက်ကနေ ပြေးပြီး ရှောင်တတ် ခဲ့တာ၊ အလွန်မုန်းသူ များကိုပင် ထိပ်တိုက်တိုး တိုင်း နှစ်လိုဖွယ် ဟန်ဆောင်ပြုံးပြနိုင်ခဲ့တာ၊ အပိုး ကျိုးပိရိသေသပ်စေခဲ့တာ၊ သည်အချိန် မှာတော့ဖြင့် ဘယ်သူမှ ပုံသွင်းမရ ခဲ့သော ကျွန်မ တကယ့်ကို ချောမွေ့ သေသပ် နေခဲ့ပြီ။ ထိုအချိန်မှာမှ
“ငါ့လို နေစရာ အတွက် နင်ပူရလား၊ ငါ့လို ပိုက်ဆံရဖို့ ရှာဖွေနေရလား၊ စိတ်ညစ်စရာ မရှိတဲ့ ဘ၀မှာ တမင်ကြီး လုပ်ဇာတ်ထွင်ပြီး ရှာကြံ မနေနဲ့၊ အချစ်ဆိုတာ နံပါတ်နှစ်ပဲ”
“မမက ရည့်ကို တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန် တတ်အောင် သင်ပေးနေတာပဲ”
နေ့တိုင်း ချစ်ခင်စွာခေါ်ပြောခဲ့သော ကျွန်မ တို့နှစ်ယောက် ရုတ်တရက် သူစိမ်းတွေလို ဝေး ကွာ ပျက်စီးသွားကြပြီ။ ထိုနေ့တွေမှာ စကိုင်း အကြောင်း မေ့ဖျောက် ထားခဲ့ကြသည်။ မမနှင့်
မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့လျှင်တောင်မှ ကျွန်မ မမကို မခေါ်တော့။
မမ၏ အော်ခေါ်သံကိုပင် လျစ်လျူရှု ပစ်နိုင် လောက်သည် အထိ ကျွန်မ မမအပေါ် ပြတ်သား ခဲ့သည်ဟု ထင်ခဲ့ပေမယ့် အားငယ် စိုးထိတ်သော အညိုရောင် မျက်လုံးများအား သတိ ရမိစဉ်မှာ တော့ ကျွန်မ မမအား ပြန်ခေါ်ခဲ့ပါသည်။ ထို အချိန်မှစ၍ ကျွန်မမှ မမအား အမြဲရွဲ့ခဲ့သော စကားတစ်ခွန်း ရှိသည်။
“လူ့ဘ၀မှာ စားဝတ်နေရေးက အရေးကြီးဆုံး” ဆိုတာလေ။
“နင် ငါ့စေတနာကို အရမ်း စော်ကားတယ် ရည်မွန်မိုး၊ အတူတူပဲ၊ နင်တို့နှစ်ယောက်၊ ငါ ပြုပြင်ပေးလို့ ပြောင်းလဲခဲ့တာလည်း နင်တို့ပဲ၊ ငါ့ကို စော်ကားခဲ့ တာလည်း နင်တို့ပဲ၊ နင်တို့ နှစ်ယောက်က ငါ့ကို စော်ကားဖို့ လူဖြစ်လာသလား အောက်မေ့ရတယ်”
ပြောရင်းဆိုရင်း မမ ငိုပြန်တော့ သူအလွန် နှစ်ခြိုက်သော ကော်ဖီနှင့် နှစ်သိမ့်ရသည်။ အရင် ကတော့ မမ ကော်ဖီမှာလျှင် ကျွန်မ အတွက်ပါ တစ်ခွက်ပိုမှာမြဲ ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့ကတော့ ကျွန်မ ရင်ထဲ မိုးထစ်ချုန်း စေခဲ့သောနေ့ ဖြစ်လေသည်။ မမက အဆောင်ကို ခေါ်တော့ စိတ်ရှုပ်စွာပင် လိုက်သွားမိသည်။ အနည်းငယ် သေသပ်သော အခန်းငယ် လေးခန်း ဖြင့်ဖွဲ့စည်း ထားသည့် သူမ၏ အဆောင်ခန်း လေးကိုတော့ ကျွန်မ နှစ်ခြိုက်သွားပါသည်။
“နင်တို့နှစ်ယောက် သိပ်တူတာပဲ သိလား”
“သည်လောက် တူနေမှတော့ သမီးကို စကိုင်းနဲ့ သဘော တူလိုက်ပါလား”
“မဖြစ်ဘူး ရည်၊ စကိုင်းဆိုတာ ဘယ်သူလဲ သိလား၊ နင်သိရင် ငါ့ကို မုန်းမှာ”
ကျွန်မ ရယ်လိုက်တော့ မမ လိုက်မရယ်ပါ။
“သူနဲ့ သဘောတူလို့ မရတာ ဘာကြောင့်လဲ၊ သူက သမီးရဲ့ ရည်းစားဟောင်းများလား၊ ဒါမှ မဟုတ် သမီးရဲ့အစ်ကိုတွေထဲက တစ်ယောက် များလား၊ အစ်ကိုထဲက ဘယ်သူ ရှိနိုင်မလဲ၊ ကိုကြည်မိုးပဲ ရှိမှာပေါ့”
ဘုရားရေ။ ကျွန်မ ကျီစယ်လိုက်တာ ဖြစ်ပေမယ့် သူ့မျက်ရည်တွေ ပါးပြင်ပေါ် ဖြတ်ပြေးသွားသည်။
“မမ ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောနော်၊ သမီးအစ်ကို မဟုတ်ဘူးလို့”
“သူ မနေ့ညက ကိုယ့်ဆီ ဖုန်းဆက်တယ်၊ သူ့ကောင်မလေး ဘယ် လောက် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အကြောင်း၊ ငါ အရမ်းမုန်းတာပဲ”
ကျွန်မ အနည်းငယ် ရိုင်းပျစွာပင် သူ့မျက်လုံးများနှင့် ထိပ်တိုက်ရင် ဆိုင်ပစ်လိုက်သည်။ ရုတ်တရက် ပွင့်အာသွားသော သူမ နှုတ်ခမ်းသားများ။ ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်ကို အရမ်းတူတာပဲလို့ သူပြောခဲ့တာကိုး၊ သူက တစ်ချိန်လုံး ၀ှက်ဖဲကြီး ကိုင်ပြီး နေရစ်ခဲ့သူပဲ။ ကျွန်မရော၊ ကိုကိုပါ Passလို့ ပြိုင်တူ အော်ဟစ်ရမည့် နှစ်စပိတ်ဒ်၊ အကြီးဆုံး ဖဲချပ်အား သူမ ကိုင်ဆောင် ထားခဲ့တာပဲ။
သူမ ကျွန်မအပေါ် အလွန်အကျွံ ဂရုစိုက်ခဲ့တာ၊ တခြားဟောက်ဆာဂျင် တွေထက် အရေးပေးခဲ့တာတွေဟာ ကျွန်မကို ချစ်လို့မှမဟုတ်ဘဲ။ ကိုကို့ မျက်နှာကြောင့်သာ။
“ဟုတ်တယ် ရည်၊ ငါ ဒါကြောင့် နင့်ကို အရမ်းကြောက်ခဲ့တာ၊ နင် မမှတ်မိလို့ပါ၊ နောက်ဆုံး နှစ်တုန်းက ဆေး ၂ ၀င်းထဲမှာ ငါတို့နှစ်ယောက် အတူ ရှိနေတုန်း နင် လာနှုတ်ဆက်ဖူးတယ်၊ နင့်အစ်ကိုက ဒါကျွန်တော့် ညီမလေလို့ ပြောတယ်၊ အဲဒီ ကတည်းက၊ ငါ နင့်ဆရာမ ဖြစ်ကတည်းက ငါ နင့်ကို ကြောက်နေခဲ့ရသူပါ”
ဟု ကျွန်မအသံထွက် ဆဲမိသွားသည်။ ကျွန်မ လက်ဖျား ခြေဖျားတွေ အေးစက် ထုံကျဉ်သွားသည်။ သူမကို ကျွန်မ အံ့အားသင့် ရသလို အမှန် တကယ် ခါးသီးမိသွားသည်။
“ဒါကြောင့် မမက ကျွန်မကို အရမ်းမျက်နှာသာ ပေးခဲ့တာကိုး”
ရုတ်တရက် သူမ ပစ်ပေါက်လိုက်သော လက်ကိုင်ဖုန်းက ကျွန်မ ညာဘက်ခြမ်းအား ရှပ်ထိသွားသည်။
“မမိုက်ရိုင်းနဲ့၊ အဲဒါနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး၊ တကယ့်ကို ငါကြောက်နေခဲ့တာ”
မမ ရှိုက်သံကြား၍ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ပါးပြင်တွေ စိုလက်နေတာ သုတ်ပေးဖို့ သတိရသည်။ အမှန်တော့ ကျွန်မ မမကိုမုန်းဖို့ဆိုတာ အဝေးကြီးပါ။ ယောက်ျား တစ်ယောက်ကို အစွဲအလမ်းကြီးစွာ ချစ်နေသေးသော မမ အတွက် ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကပင် ကူးစက် နာကျင်ခဲ့သေးတာ မဟုတ်လား။
သူမ လက်ကိုင်ဖုန်းဖြင့် ကိုကို့ဖုန်းကို လှမ်းဆက်တော့ သူမလှမ်းတား သည်။
“မလုပ်နဲ့၊ သူမမကို အရမ်း အမြင်ကတ် သွားလိမ့်မယ်၊ မမအပေါ် အရမ်း ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ ကလေး တစ်ယောက်ဟာ ရည်မွန်ပါလို့ သူသိထား ခဲ့ပြီးသား၊ ဒီကိစ္စ ရည်မွန်ကို ပြောလိုက်တယ်လို့ သူသိရင် သူနဲ့ မမဖုန်းတောင် ပြောရတော့မှာ မဟုတ်ဘူး”
ပေကတ်စွာပင် ကိုကို့ကို ဖုန်းခေါ်တော့ သူ ရုတ်တရက် ထထွက် သွားသည်။ ကိုကိုနှင့် စကား ပြောနေစဉ်တွင်တော့ သူမ ဘုရားရှေ့၌ သောက် တော်ရေကပ်နေခဲ့ပြီ။ ပုဆစ်တုပ် ဆုတောင်း နေသည့် သူမ၏ ခွေပျော့ပျော့ ပုံရိပ်လေးကိုတော့ ကိုကိုမြင်လျှင် သနားချင်မှ သနားတော့မည် ဆိုတာ သိနှင့်သည့် အတွက် မမကို အားနာမိပါသည်။
“ငါနင်တို့ အသိုင်းအ၀ိုင်း ကြီးလွန်းလို့ကို ကြောက်တယ် သိလား”
မမ ၀မ်းနည်းစွာ ဖွင့်ဟတော့ ကျွန်မမှာ ရယ်ရအခက်၊ ငိုရအခက်။ ကိုကိုနှင့် ကျွန်မက မောင်နှမ အရွယ်တွေ ဖြစ်ပေမယ့် တကယ်တမ်း ကျတော့ တစ်ဝမ်းကွဲ တော်သော တူဝရီးတွေ ဖြစ်၏။
“ကိုကိုနဲ့ ခုတွဲနေတဲ့ ကောင်မလေးက အဆင် ပြေကြတယ် ညီမလေး၊ အိမ်ကလည်း သိနေ ကြပြီ၊ မမလား၊ အင်း- အဓိကက အသက် ကွာတာပေါ့လေ၊ ဘယ်လိုမှ ကိုယ့်အိမ်က သဘောတူမှာ မဟုတ်ဘူး”
ကိုကိုနှင့် စကား ပြောပြီးချိန် တွင်တော့ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်တည်းသာ သိနိုင်သော အဖြေကို ဆုပ်ကိုင် ထားနိုင်ခဲ့ပြီ။ မျက်လုံးသေ များဖြင့် ကျွန်မအား မော့ကြည့်နေသော မမ မျက်လုံး ညိုလေးများဆီ ကျွန်မက ဘယ်လို ရက်စက်သော စုတ်ချက်မျိုးဖြင့် ခြယ်သရမှာ တဲ့လဲ။ အနည်ထိုင်ပြီးသော ကိုကို့ဘ၀၌ မမ ဘာကြောင့်များ အနည်မထိုင် သွားခဲ့ရတာလဲ။ အမှန်တကယ် မမနှင့် ကိုကို့ ဇာတ်လမ်းက လွန်ခဲ့ သည့်ခြောက်လ ကတည်းက ပြတ်တောက်သွား ခဲ့ပြီ။
စကိုင်းကြောင့် (Gastritis) အစာအိမ်ရောင် ခဲ့ရသည့် ဇာတ်လမ်းကိုလည်း ကျွန်မ သိသည်။ ထမင်းတောင် မစားနိုင်ဘဲ အလုပ်ကိုသာ တရစပ် ဖိလုပ်ခဲ့သည့် မမ။ ဆရာမ ၀င်းဝင်းလတ်၏ ၀တ္ထုထဲမှ “ဒေါက်တာခင်ဦးနွယ်” လို အလုပ်က ဒဏ်ရာကို ကုစား ပေးသွားနိုင်ရင် ကောင်းလိမ့် မည်။ အလွန် ပိန်လှီပါးလျပြီး ခပ်ဝေးဝေးမှ ကြည့် လျှင် ဖြူလွှလွှစက္ကူပါးလေး တစ်ချပ်လွင့်လာ သည်နှင့်တူသော မမ။ အချစ်က နံပါတ်နှစ်ဟု ပခုံးစောင်းတိုက် ရွဲ့ခဲ့သော မမ။ စားဝတ်နေရေးအား အချစ်ထက် အရေးကြီး ပြခဲ့သော မမအား အရှုံးတွေလွန်းထိုးနေသည့် ပုံစံနှင့် မြင်တွေ့ရချိန်မှာ ကျွန်မရင်ထဲ နင့်သီးနေခဲ့သည်။
“ကိုယ်တို့က တကယ်တမ်း ပြတ်သွားခဲ့ပြီး ပါပြီ၊ ခုချိန်မှာ ကိုယ်နဲ့ ညီမလေး သူ့ကို ဖေးဖေး မမနဲ့ ကူညီကြဖို့ပါပဲ၊ ကိုယ်တို့ ဇာတ်လမ်းက တကယ်တော့ အားလုံး သိခဲ့တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကြီး ပါပဲ”
ကိုကို့စကားက တည်ငြိမ် ပြတ်သားလွန်း သလောက် မမ ငိုရှိုက်သံကေ၀၀ါး လှုပ်ခတ်နေဆဲ ဖြစ်သည်။
“နင်တို့နှစ်ယောက် အရမ်း ရက်စက်တတ် တာပဲ”
“ပြန်ခံစားရပါစေလို့ ဆုမတောင်းချင်ဘူး လား မမ”
မိုးစက်တချို့ အနည်းငယ် အူကြောင်ကြောင်နိုင်စွာ ကျလာခဲ့ပြီ။ သင်္ကြန်အကြို မိုးရေစက်များ ဟု ဆိုရမလား။ သေချာသည်က ပူလောင်သော ရင်ဘတ်နှစ်ခု တစ်ခဏချင်း အေးစက် သွားကြပြီ။ မိုးရေစက်တွေ ဘယ်နေရာက ကျလာသလဲ။ ခုနေ မမ တစ်ယောက် မော့မကြည့် မိဖို့တော့ လိုလိမ့်မည်။
မိုးရေစက် တွေကို မွေးဖွား ပေးနိုင်သော တိမ်သားထုတွေ ကောင်းကင်ဆီက ဖြစ်တည်လာ သည်ဆိုတာ မမ သတိ မရသေးခင်ထိ သည်တိုင်း လေး ဝေဒနာတွေထဲသာ မမအား စီးမျောစေချင် ပါသည်။
“စကိုင်းက ငါ့ကို ဘာပြောလဲ”
ဟု မေးလာလျှင်တော့ ကောင်းကင်ကို မော့မကြည့်ဖြစ်ဖို့ ကျွန်မ အားယူရမှာပဲဖြစ်သည်။
စက္ကူပါးလေးနှင့် တူသည့် လေးဆယ်ကျော် အရွယ် အမျိုးသမီး တစ်ယောက်၏ အရှုံးတွေ လွန်း ထိုးနေသည့် မျက်နှာဆီ မိုးရေစက်တွေ ခပ်ပြင်း ပြင်းလေး ရိုက်ခတ် နေကြသည်။ ခုနေ အညိုရောင် မျက်ဝန်းတစ်စုံ ကောင်း ကင်ဆီ အကြည့်လွှဲ မသွား ဖို့ကိုတော့ ကျွန်မ ဆုတောင်း နေရဆဲ ဖြစ်လေသည်။ မမအား ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်လုံး ထားပစ်ခဲ့ ရမှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သောကြောင့် အကယ်၍ မမနှင့်အတူ တာဝန်ကျခဲ့ပါလျှင် ဂရုစိုက်ပေးကြ ပါရန် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဟောက်ဆာဂျင် များအား မေတ္တာရပ်ခံ အပ်ပါသည်။
(Teen မဂ္ဂဇင်း၊မေလ ၂၀၁၁)
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! November 19, 2013 at 5:30 AM
Which you like most????
၁။ အဝေး တစ်နေရာ၌ မိုးရေစက်တို့ တွဲလဲ ခိုနေဆဲ ဖြစ်သည်။ အခန်းထဲရှိ အအေးဓာတ်က ကျွန်တော့်ရိုးတွင်း ခြင်ဆီများထိ ထွင်းဖောက် အေးစိမ့် သွားခြဲ့...
၁။ တောင်ဇလပ် ပန်းတွေ မင်းမူနေသည့် ဒေသ တစ်ခုဆီမှာ ပုစွန်ဆီရောင် ကောင်းကင် တစ်ခု ခြယ်သ ထားခဲ့သည်။ တိမ်သားထုတွေသည် မြင့်ရာမှ နိမ့်ရာ၊ ထို့နော...
၁။ ထိုနေ့မှစ၍ မောင့်အပြုံးတွေသည် ယခင်ထက် များစွာ လေးလံ ထိုင်းမှိုင်းနေမှန်း ကျွန်မ ပါးနပ်စွာ သိရှိ ခဲ့ပါသည်။ ဒါတွေသည်ပင် ခေတ်မီလွန်းေ...
၁။ နောက်ကျနေမြဲ နောက်ကျနေ တတ်သော ခင်သန့်စင်သည် တစ်ခါလည်း ပိုးသတ် ဆေးနံ့တွေ၊ လူနာနံ့တွေ ရောပြွမ်းနေသည့် ကော်ရစ်ဒါ တစ်လျှောက် ခပ်သုတ်သုတ်လေ...
၂၀၀၅... ဆေးကျောင်းတက်ခွင့်...အဲဒီအိပ်မက်က ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ ဆုလာဘ်နံပါတ် တစ်ပါ...ဆေးမန်းရဲ့ ရင်ခွင်မှာ ကိုယ့်ခေါင်းလေးမှီအုံး..ကိုယ့်နှလုံး...
“ကျွီ”ခနဲ မြည်သွားတဲ့ ပတ္တာအို တစ်ခုရဲ့ အော်မြည်သံကြောင့် ကျင့်သား ရနေတဲ့ ကိုယ့် မျက်လုံး တွေကို အစိမ်းရင့်ရောင် နာရီအို တစ်ခုဆီ လွှဲထား ပစ်လိ...
ကိုယ့်ကို မချည်နှောင်ချင်ပါနဲ့ ကိုယ်က မင်းရည်းစားမဟုတ်သလို မင်းမိန်းမလည်း မဟုတ်ဘူးလေ ကိုယ့်ကို ပေးပျံသန်းပါ စကားလုံးတွေနဲ့ ချိန်ဆ တိုက်ခိုက...
သူ ပြန်လာခဲ့ပါပြီ ဒါပေမယ့် သူပြန်လာတဲ့နေ့မှာပဲ ကျွန်မဟာ ကောက်ရိုးပုံထဲ အပ်ပျောက်ခဲ့တယ် လာပါလို့ လည်း အရင်လို မဖိတ်ခဲ့သလို ပြန်ပါလို့လည်...
1st MB... fresher လေးပေါ့ ဘာမှတ်လဲ..တဲ့ ဆေးစစ် ဟိုစစ် သည်စစ် ပြီးချိန်.. ငါကွ ဆေးကျောင်းသူ အော်....။ 2nd MB.. ရှုပ်ပွေလီ.. ဖော်မလင်နံ့ကြား ...
ကျွန်မ ချစ်သော နောင်တ
နင် ယုယဖို့ မေ့နေခဲ့တဲ့ လူကို ငါ အဲသည်နေ့က မိုးရိပ်တွေထဲတွေ့တယ် နင် မပြုစုလို့ ညှိုးခြောက်နေတဲ့ သူ့ကို ငါသနားလွန်းလို့ ငါ့အိပ်ကပ်ထဲကောက်သိ...
Greeting Words for me
GAMBLING Casino de juego Buy Shaving Products Counter WILLIAM HILL CASINO CLUB